Maahmaahyadii 11 SOM - Kafaddii khiyaano ah Rabbigu aad buu u - Bible Gateway
Maahmaahyadii 10Maahmaahyadii 12
Maahmaahyadii 11 Somali Bible (SOM)
11 Kafaddii khiyaano ah Rabbigu aad buu u karhaa,
Laakiinse dhagaxii miisaanka oo xaq ah wuu ku farxaa.
2 Markuu kibir yimaado, waxaa timaada ceeb;
Laakiinse xigmaddu waxay la jirtaa kuwa is-hoosaysiiya.
3 Kuwa qumman waxaa kaxayn doonta daacadnimadooda,
Laakiinse khaayinnada qalloocnaantoodu waa baabbi'in doontaa iyaga.
4 Maalinta cadhada maal faa'iido ma leh,
Laakiinse xaqnimada ayaa dhimasho kaa samatabbixisa.
5 Ninkii kaamil ah xaqnimadiisu jidkiisay toosisaa,
Laakiinse kan sharka lahu wuxuu ku kufi doonaa sharkiisa.
6 Kuwa qumman xaqnimadoodaa samatabbixin doonta,
Laakiinse khaayinnada waxaa qabsan doona damacooda xun.
7 Nin shar lahu markuu dhinto, wuxuu filanayay way baabbi'i doontaa,
Oo xumaanfalayaasha rajadooduna way baabba'daa.
8 Kii xaq ah waxaa laga samatabbixiyaa dhibaato,
Oo meeshiisana waxaa yimaada kii shar leh.
9 Labawejiilahu afkiisuu deriskiisa ku halligaa,
Laakiinse kan xaqa ahu aqoon buu ku samatabbixi doonaa.
10 Kuwa xaqa ahu markay barwaaqoobaan, magaaladu way rayraysaa,
Laakiin kuwa sharka lahu markay halligmaan farax baa lagu dhawaaqaa.
11 Kuwa qumman ducadooda magaaladu sare bay ugu kacdaa,
Laakiinse kuwa sharka leh afkoodu magaaladuu dumiyaa.
12 Kii deriskiisa quudhsadaa waa caqli daranyahay,
Laakiinse ninkii garaadka lahu wuu iska aamusaa.
13 Kii sida mid xan badan u warwareegaa wuxuu daaha ka qaadaa waxyaalo qarsoon,
Laakiinse kii ruuxiisu aamin yahay xaalkuu qariyaa.
14 Markaanay talo jirin, dadku waa dhacaa,
Laakiinse taliyayaasha badnaantoodu waxay leedahay nabadgelyo.
15 Kii qof qalaad dammiintaa, xumaan buu ka helaa,
Laakiinse kii dammiinashada necebu ammaan buu u fadhiyaa.
16 Naag nimcaysan sharaf bay haysataa,
Oo niman xoog lahuna maal bay haystaan.
17 Ninkii naxariis badanu naftiisuu wanaag u sameeyaa,
Laakiinse kii aan naxariis lahaynu jidhkiisuu dhibaa.
18 Kan sharka lahu wuxuu shaqaystaa mushahaaro khiyaano miidhan ah,
Laakiinse kii xaqnimada beeraa wuxuu heli doonaa abaalgud la hubo.
19 Xaqnimadu waxay u kacdaa xagga nolosha,
Sidaas oo kalena kii sharka raacaa wuxuu u raacaa dhimashadiisa.
20 Kuwa qalbigoodu qalloocan yahay Rabbigu aad buu u karhaa;
Laakiinse kuwa jidkooda ku qumman wuu ku farxaa.
21 Waxaan aad idiinku xaqiijinayaa inaan kan sharka lahu taqsiirla'aan doonayn.
Laakiinse farcanka kuwa xaqa ah waa la samatabbixin doonaa.
22 Naag qurux badan oo aan digtoonaan lahaynu
Waa sida dahab gafuurka doofaarka ku jira.
23 Kuwa xaqa ah waxay doonayaan wanaag keliya,
Laakiinse kuwa sharka ah filashadoodu waa cadho.
24 Waxaa jira mid wax firdhiya, oo haddana sii korodhsada;
Oo waxaa jira mid ceshada wax ka sii badan in ku habboon, oo haddana sii caydhooba.
25 Qofkii deeqsi ah baa la barwaaqaysiin doonaa,
Oo kii wax waraabiyana, isna waa la waraabin doonaa.
26 Kii hadhuudh ceshada, dadka ayaa habaari doona,
Laakiinse kii iibiya, duco ayaa ku dhici doonta.
27 Kii wanaag aad u doonaa wuxuu doonayaa raallinimo,
Laakiinse kii xumaan doona, way u iman doontaa.
28 Kii maalkiisa isku halleeyaa wuu dhici doonaa,
Laakiinse kii xaq ahu wuxuu u barwaaqoobi doonaa sida caleen cagaar ah.
29 Kii gurigiisa dhibaa dabayshu dhaxli doonaa,
Oo nacaskuna wuxuu midiidin u ahaan doonaa kan qalbigiisu caqliga leeyahay.
30 Kan xaqa ah midhihiisu waa geed nololeed,
Oo kii nafo soo hanuuniyaana caqli buu leeyahay.
31 Bal eega, kan xaqa ahu abaalkiisuu dhulka ku heli doonaa,
Haddaba immisa abaalgud oo ka sii badan bay heli doonaan kan sharka leh iyo dembiluhu.